Tirada na soo booqday.	Maanta12746shalay27115Isbuucaan12746Isbuucii hore262976Bishaan1032637Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4850807Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 396 guests, 1 members Your IP: 107.20.129.212 , Today: May 26, 2013	Maleeshiyada Calool-uusta ah ee DKMG oo laba wiil oo dhalinyaro ah ku dilay Muqdisho.
Written by Maamul on 05 September 2012. Maleeshiyaadka DKMG ayaa caawa fiidkii toogasho ku dilay laba wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo ay si Maleeshiyada Calool-uusta ah ee DKMG oo ku dagaalamay Degmada Yaaqshiid.
Written by Maamul on 05 September 2012. Waxaa geeriyooay labo, afar kalena dhaawaac ayaa soo gaaray kadib markii iska hor imaad xoogan uu maanta Dhaca, Kufsiga iyo Dilalka maleeshiyada Dowlad ku sheega oo Muqdisho ku soo badanaya.
Written by Maamul on 05 September 2012. Tan iyo markii ay Gobolka Banaadir xeelada dagaal uga baxeen Maamulka Islaamiga Wilaayada gobolka Dagaallo culus oo hadda ka socda Magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Written by Maamul on 05 September 2012. Dagaallo culus oo la isku adeegsanayo hubka culus iyo midka fudud ayaa goordhow ka bilowday Qaraxyo ka dhacay magaalada Marka ee wilaayada Islaamiga gobolka Sh/hoose.
Written by Maamul on 05 September 2012. Ugu yaraan saddex qarax oo waa wayn ayaa gigilay magaalada Marka ee Wilaayada Islaamiga gobolka Sh/hoose Garbahaareey Oo xalay gudaha Loo galay Iyo faah faahin laga helayo dagaalkii Jubooyinka
Written by Maamul on 05 September 2012. Iyadoo xalay saacaddu marka saddex saac oo habeen nimo Mujaahidiinta ay weerar ku qaaden duleedka degmada Faahfaahino ka soo baxaysa dagaalo iyo Qaraxo galabta iyo caawa ka dhacay Xaafada Ciisa Cabdi.
Written by Maamul on 04 September 2012. Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus iyo qaraxyo galabta ka dhacay Xaafada Maina Wakarari: Waxaan ka wal walsanaa xaaladda wiilkeyga waanse maqlay Inuu dhintay (Dhageyso)
Written by Maamul on 04 September 2012. Maina Wakarai oo ah Aabaha dhalay mid ka mid ah askartii lagu soo bandhigay Magaalada Kismaayo ayaa Dagaal ka socda duleedka Afmadoow iyo qasaara ka dhashay dagaalkaas.
Written by Maamul on 04 September 2012. War iminka ku soo dhacay warqabadka shabakada SomaliMeMo ayaa sheegaya in dagaal culus uu hadda ka soconayo Lydia Maina oo ah gabar la dhalatay George Maina oo ah askari Kenyaati ah oo lagu dilay Jubooyinka oo Mujaahidiinta ka codsatay in meydka walaalkeed loo soo gacan galiyo (DHAGEYSO)
Written by Maamul on 04 September 2012. Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa Barta ay ku leedahay Twitterka waxa ay ku baahisay cod laga duubay Musharaxiinta u taagan Hogaanka Dowladda Reer Galbeedka soo dhisayaan oo Shuruud culus lagu xiray.
Written by Maamul on 04 September 2012. Guddiga Farsamada waxa loogu yeero Doorashooyinka dalka, hase yeeshee Reer galbeedku ay hogaaminayaan Boqollaal ka tirsan Ciidamada Mujaahidiinta oo gaaray furimaha dagaalka ee Wilaayada Jubbooyinka. Written by Maamul on 04 September 2012. Boqollaal ka tirsan Ciidamada Mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray qeybo ka tirsan Idaacadda Shabelle oo Sharuur fara badan ku soo qaadatay barakicinta Shacabka magaalada Kismaayo.
Written by Maamul on 04 September 2012. Idaacadda Shabelle oo ka mid ah Warbaahinta Cadowga ayaa maanta ilaa iyo xalay waxa ay ku cel celinaysay Dadka Beeralayda Degmada Balcad oo ka cabanaya maleeshiyada maamulka Degmadaasi.
Written by Maamul on 04 September 2012. Muddo Afar sano ah kadib markii maamulkii Islaamiga Wilaayada gobolka Sh/dhexe dib uga gurtay Degmada Qarax xoog leh oo goordhow laga maqlay Xaafada Gubta Magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 04 September 2012. Qarax xoog leh ayaa laga maqlay bartamaha Xaafada Gubta ee Magaalada Muqdisho, qaraxaasoo aan ilaa iyo Qarax lagu dilay Askar ka tirsan DKMG oo ka dhacay mgaalada Marka.
Written by Maamul on 04 September 2012. Qaraxani oo ahaa Miinada nooca meelaha fog laga hago ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan DKMG Faahfaahin dheeraad ah: Dagaallo dhimasho iyo Dhaawac sababay oo caawa ka dhacay Garoonka Kubadda Cagta Stadiom Muqdisho.
Written by Maamul on 03 September 2012. Dagaallo u dhaxeeyay Mujaahidiinta Soomaaliya iyo kuwa gaalada ah ee ciidamada Shisheeye islamarkaana Mujaahidiinta oo weerar culus ku qaaday Isbartiimada magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada Ugandha.
Written by Maamul on 03 September 2012. War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in mujaahidiinta Xarakada Al Shabaab ay goordhoweyd weerar aad u Warbaahinta cadowga oo ilaa iyo shalay ku cel celinayey in duqaymo xaga cirka ah lagu hayo magaalada Kismaayo.
Written by Maamul on 03 September 2012. Warbaahinta cadowga ayaa shalay illaa iyo maanta waxa ay qorayeen ama ay sheegayeen in duqaymo ba'an Qaar ka mid ah Ahalada askartii ciidamada Kenya kaga Bakhtiday Jubooyinka oo ka codsaday Mujaahidinta Al Shabaab in ay ku soo wareejiyaan maydadka wiilashooda.
Written by Maamul on 03 September 2012. Qaar ka mid ah Ahalada Askartii Kenyaatiga kaga bakhtiday dagaaladii Jubooyinka ayaa waxay Mujaahidiinta Laba ka mid ah Jawaasiista AMISOM oo goor dhoweyd xad Rido ah looga fuliyey magaalada Baraawe.
Written by Maamul on 03 September 2012. Waxaa goor dhoweyd lagu toogtay magaalada Baraawe laba nin oo soomaali ah oo ka tirsanaa jawaasiista Saxaafadda Soomaalida oo billowday fulinta Heshiiskii ay Amisom kula galeen dalka Ruwanda. Written by Maamul on 03 September 2012. Warbaahinta Soomaalida ayaa billaabay fulinta heshiiskii dhowr maalmood ka hor dalka Ruwanda ay Qaraxyo ay ku dhinteen maleeshiyada DKMG oo ka dhacay Suuqa Bakaaraha.
Written by Maamul on 03 September 2012. War naga soo gaaray Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka Mujaahidiinta Soomaaliya oo la wareegay Deegaanaka Laba-dhagax, Dagaallo iyo Qaraxyo ka dhacay gudaha degmada Afgooye.
Written by Maamul on 03 September 2012. Dagaallo la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud ayaa gudaha Degmada Afgooye ku dhexmaray Ciidamada Start«919293949596979899100»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan